PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN : Averina amin’ny hasiny ny Polisim-pirenena Malagasy
Ilaina ny fahamendrehana ara-pitondran-tenan’ireo polisim-pirenena. Mifototra amin’izany ny fiverenan’ny fitokisam-bahoaka amin’izy ireo, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian raha nitafa mivantana tamin’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena, omaly. 20 août 2019
Manana ny andraikiny amin’ny fampandriana fahalemana manerana ny nosy ny polisim-pirenena. Ilaina anefa ny tena hianteheran’ny vahoaka amin’izy ireo, ka hahatsiaro ho mandry ivohon’ny vato izy ireo rehefa mijoro ny polisim-pirenena fa tsy sanatria ny mifanohitra amin’izany. Manoloana izany indrindra no nanambaran’ny Praiminisitra ny tokony hamerenana amin’ny laoniny ny hasin’ny polisim-pirenena. Miainga avy any amin’ireo polisy tsirairay no ahafahana manatanteraka izany amin’ny alalan’ny fahaizan’izy ireo mitondra tena araka ny tokony ho izy.
Nandritra ny lanonam-panokafana tamin’ny fomba ofisialy ny atrikasa fikaonan-doha ho an’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena no nanaovan’ny Praiminisitra an’io fanambarana io. Nambarany fa zava-dehibe ny fikaonan-doha tahak’izao mba hisian’ny fifanakalozan-kevitra sy ny fizarana traik’efa. Tsy tokony handeferana, hoy izy ny trangana kolikoly amin’ny lafiny rehetra. Ankoatra izay tokony hojerena akaiky ny fomba fanapariahana ireo polisy manerana ny nosy sy ny fomba hanomezana ny fisondrotam-boninahitra eo anivon’ny Polisim-pirenena mba ireo izay tena mendrika izany ihany no hahazo. Ao anatin’ny roa andro nanomboka, omaly, no hanatanterahan’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena an’ity atrikasa ity.
Omaly dia nasongadina ireo ezaka efa vitan’izy ireo tato anatin’ny enim-bolana voalohan’ny taona. Isan’izany ny ady amin’ny asan-jiolahy, ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny mira lenta, ny fanamafisana ny fanajana ny fitsipika anatiny, ny etika sy ny deontolojia mifehy ny asan’ny polisim-pirenena, ny ady amin’ny kolikoly ary ny fametrahana ny fomba fitantanana tompon’andraikitra. Hiaraha-mandinika mandritra ity atrikasa ity ihany koa ny fomba hoentina hanatsarana ireo paik’ady sy fomba fiasa vaovao ahafahana manatanteraka ireo vina sy tanjona izay napetraky ny minisitry ny filaminam-bahoaka ao anatin’ilay « Contrat de performance » nifanaovany tamin’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta ary tafiditra ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ihany koa.